कोभिड–१९ ले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको असर, समग्र विकास प्रणालीमा रहेका समस्या, यसको समाधान, अबको रणनीतिका बारेमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलसँग आर्थिक अभियान दैनिकका विजय दमासेले गरेको कुराकानीको सार :
कोभिडपछिको मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
कोरोना महामारी न्यूनीकरणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट नेपालको अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा प्रभावित बन्न पुग्यो । अहिलेको अर्थतन्त्र हेर्दा कतिपय सूचक राम्रा छन् भने कतिपय सूचकमा सुधार गर्नुपर्ने स्थिति छ । जस्तै– विप्रेषण खासै खस्केको देखिँदैन । आयात त्यति घटिरहेको छैन भने निर्यातमा पहिलाको तुलनामा खासै कमी आएको देखिँदैन । भुक्तानी सन्तुलन ठीक छ, मुद्रास्फीति दर न्यून छ भने अरू विकास निर्माणको काम अहिलेको परिस्थिति हेर्दा सापेक्षिक रूपमा अघि बढेको देखिन्छ । यस्तै राजस्व लक्ष्यभन्दा कम संकलन भए पनि निराशाजनक नै चाहिँ देखिँदैन । कोभिडले सिंगो अर्थतन्त्रमा पारेको असरका कारण आर्थिक वृद्धिदर भेट्न यसपटक हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।
कोभिडको असरबारे योजना आयोगले सूक्ष्म अध्ययन पनि गरेको थियो, खासमा कस्तो पाउनु भयो ?
करीब ८६ लाख नेपालीको नियमित आर्थिक गतिविधि प्रभावित बन्न पुग्यो । उनीहरूले ऊर्जाशील समय खुम्चाएर बस्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । यसले समग्र अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको आकलन छ ।
क्षेत्रगत रूपमा पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ठूलो नोक्सानी पुग्यो । विकास निर्माणका काम पनि प्रभावित बने । अब विदेशी पर्यटक नेपाल आउने वातावरण नबनेसम्म पर्यटन क्षेत्र अघि बढ्ने देखिँदैन । आन्तरिक पर्यटनतर्फ काठमाडौंबाहिर केही सामान्य हुन थाले पनि राजधानीमा कमजोर नै छ ।
कोरोना महामारीले विकासको गतिमा ठूलै असर गरेको पाइयो । कोभिडका बेला आयोजनाहरू प्रभावित भए पनि अहिले भने कतिपयमा सन्तोषजनक रूपमा काम अघि बढेका छन् । विदेशी कामदार, उपकरण, प्राविधिकको अभाव अझै पनि कतिपय आयोजनामा छ । जस्तै– तामाकोशी आयोजनाका लागि आवश्यक कतिपय सामग्री विदेशमा कम्पनी नै बन्द भएकाले ल्याउन सकिएको छैन । मेलम्ची खानेपानी, गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई समेत कोभिडले ढिलो बनाइदिएको पाइयो । यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र खर्च प्रणाली पनि प्रभावित बनेको देखिन्छ ।
समग्र अर्थतन्त्रको अध्ययन गर्दा कोभिडबाट नेपालको अर्थतन्त्रमा ३ खर्ब २२ अर्बको क्षति पुगेको छ । त्यसलाई उकास्न ६ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
१५औं योजनाका लक्ष्यहरू पनि प्रभावित भएका होलान् । सूचकांकहरू संशोधन गरिँदै छ कि ?
समग्र अर्थतन्त्रमा परेको असरका कारण योजना आयोगले कार्यान्वयनमा लगेको १५औं योजनाका लक्ष्यहरू पनि प्रभावित भएका छन् । नीतिगत रूपमा भन्दा पनि लक्ष्यगत रूपमा समस्या सृजना भएको छ । जस्तै– चालू आवमा हामीले ९ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने भनेका थियौं । तर बजेट बनाउने बेलामै त्यसलाई संशोधन गरियो । बजेटले ७ प्रतिशतको लक्ष्य भनेको छ । अहिले नै त्यो पूरा होला नहोला अनुमान गर्न नसकिएला । तर गतवर्षमा भन्दा यस वर्ष सुधार राम्रो हुनेछ । विश्व बैंकले केही समयअघि शून्य दशमलव ६ को नजिक हुने भनेर आकलन गरेको छ । मलाई त्यस्तो हुन्छ भन्ने विश्वासै लाग्दैन । अर्थतन्त्रसँग जोडिएका विभिन्न आर्थिक सूचकमा केही न केही असर कोरोनाले गरेकाले १५औं योजनाको समीक्षा हामी अवश्य गर्नेछौं ।
कोभिडले प्रभावित पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न केही राहत कार्यक्रम ल्याइए पनि ‘खास फ्रेमवर्क’ सहितको प्याकेज आउन सकेको देखिएन । कहिले आउँछ ?
कोरोना महामारी कहिलेसम्म रहने भन्ने नै एकिन नहुँदा खास ‘फ्रेमवर्क’ सहितको प्याकेज आउन समय समय लागेको हो । खासगरी अहिले कोभिड प्रभावितलाई लक्षित गर्दै मौद्रिक नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको छ । ती नीतिहरू कार्यान्वयनमा पनि गएकै छन् । सरकारले ल्याएका कतिपय वित्त नीतिहरूको कार्यान्वयन बलियो रूपमा हुन नसकेको पाइएको छ । निजी क्षेत्रबाट पनि अमूर्त खालका त्यस्ता कार्यक्रम ‘रिभ्यू’ गर्न सरकारलाई दबाब परिरहेको छ । यसको सम्बोधन गर्नेगरी नै हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौं । कोभिडले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पारेको खास क्षतिको आकलन गर्दै पुनरुत्थानको फ्रेमवर्कसहितको ठोस बजेट आगामी वर्ष आउनेछ । अर्थ मन्त्रालय, सरोकारवाला मन्त्रालयसहितको सहयोग लिएर योजना आयोगले यसबारे छिट्टै छलफल समेत गर्दै छ ।
हामीले १५औं योजनामा लिएका नीतिहरू पनि आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने खालकै छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, डिजिटल अथतन्त्र, पूर्वाधार निर्माणलाई योजनापत्रले जोड दिएको थियो । त्यसमा क्रमशः लगानी बढाउने पनि भनिएकै छ । १५औं योजना सही रूपमा कार्यान्वयन भयो भने पनि अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न कठिन हुने छैन ।
कोरोनाबाट प्रभावित स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीलाई अब कसरी माथि उठाउनुपर्ला ? के हुनेछ अबको ‘मास्टर प्लान’ ?
खासगरी कोभिडका कारण मानिसको गतिविधि नबढ्दा निजी अस्पतालहरू पनि प्रभावित भएको पाइन्छ । तर अहिले फेरि पुरानै लयमा फर्कन लागेको देख्छु । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यसले गाउँगाउँमा स्वास्थ्य चौकी बनाउने अवसर समेत दियो । एकै दिन ३०९ ओटा हस्पिटलको शिलान्यास हुनु स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो क्रान्ति पनि हो ।
यसअघि स्वास्थ्य क्षेत्र त्यति प्राथमिकतामा परेको थिएन । तर कोभिडले गर्दा अहिले यो क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा प¥यो । यो क्षेत्रलाई उकास्न ठूलो मात्रामा वित्त व्यवस्थापन पनि भइरहेकाले छिट्टै माथि उठ्नेछ ।
मुख्यगरी कोभिडका कारण अध्ययन सम्बन्धी क्रियाकलाप ठप्प हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक रूपमै असर परेको छ । अब शिक्षा क्षेत्रलाई माथि उकास्न मनोवैज्ञानिक रूपमा परेको त्रास हटाउन जरुरी छ । साथै शिक्षालाई डिजिटलाइज गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नैपर्छ । त्यसका लागि अब हरेक विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच पु¥याउनुपर्छ । शिक्षालाई डिजिटलाइज गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको हालैको बैठकले हरेक विद्यालयमा इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि कार्ययोजना बनाउन समेत सरकारलाई भनेको छ ।
हामीले रूपान्तरणकारी योजनाको रूपमा डिजिटल नेपाललाई समेत राखेका छौं । फाइबर बिच्छ्याउनेदेखि टेण्डरसम्मका कामलाई गति दिई अब यसलाई साकार पार्नुपर्छ । आधुनिक डिजिटलको प्रविधि समाजका तल्लो तहसम्म पु¥याउन सकियो भने शिक्षा क्षेत्र उकासिनेछ । कोभिडले डिजिटल अर्थतन्त्रदेखि यस क्षेत्रमा ‘स्कोप’ बढाउन थप सघाउ पुगेको छ । आधुनिक सूचना प्रविधिसँग शिक्षालाई जोडियो भने यो क्षेत्रलाई माथि उठाउन समय नै लाग्ने छैन ।
कोभिडको कारण धेरैले रोजगारी गुमाउनु पर्‍यो । मुलुकमा गरीबी बढिरहेको छ । यसलाई हटाउन विकासको कामलाई तीव्रता दिनुका साथै रोजगारसँग जोडिएका कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढाउनुपर्छ । कोभिडका कारण धराशयी भएका उद्योगहरूलाई माथि उठाएर रोजगारी सृजना गराउने वातावरण तयार पार्नुपर्छ । जस्तै– पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उठाउन सकियो भने आन्तरिक रोजगारी ठूलो मात्रामा सृजना हुनेछ । बन्द उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेर पनि रोजगारी सृजना गराउनुपर्छ । निर्माणको कामलाई समेत गति दिएपछि कोभिडले खोसेको रोजगारी पुनः पुरानै लयमा फर्कनेछ । मुख्यतः यी सबै गर्न निजीक्षेत्रलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ र सरकारी क्षेत्रले समेत रोजगारी सृजना गर्न भन्दै ल्याइएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा जिम्मेवार ढंगले लाग्नुपर्छ ।
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न करीब ७ खर्ब चाहिने आकलन गरिएको छ । अब यो पू“जी जोहो गर्न कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ ?
राहत तथा पुनरुत्थानका लागि हामीले पाँच रणनीति तय गरेका छौं । ती रणनीतिहरू– संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास र आत्मनिर्भरता अभिवृद्धि हुन् । यसको कार्यान्वयनका लागि अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन रूपमा बजेट चाहिने भनेका छौं । एकैपटक ठूलो बजेट छुट्याउनुपर्ने होइन, पटकपटक गरेर पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । अहिले हामीले आकलन गरेको लागतको अनुमान २५ वर्षे दीर्घकालीन योजनासँग पनि तालमेल मिलिरहेको छ । अहिले ध्यान दिनुपर्ने भनेको तत्कालीन हो । निर्वाचन, कोभिडका लागि थप खर्च गर्दा चाप परे पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान भइसकेका छन् । साथै हाम्रो राजस्व खासगरी आयातमा निर्भर भएकाले आयातमा त्यति ह्रास नआएकाले अब स्रोतको धेरै अभाव होला जस्तो लाग्दैन । निर्माण सामग्री आयातमा अहिले समस्या छ । त्यसलाई सरकारले सहजीकरण गर्ने हो भने राजस्व थप बढ्ने देखिन्छ ।
गेमचेञ्जरका रूपमा अघि बढाइएका योजना, आर्थिक पुनरुत्थानदेखि चुनावसम्म गर्न अहिलेको आन्तरिक पूँजीले सम्भव होला ?
यो पाटोबाट हेर्दा हामीलाई ठूलो पूँजी चाहिने हुन्छ । आन्तरिक पूँजीले त भ्याउने सम्भावना नै हुँदैन । तैपनि अब आन्तरिक गतिविधि बढाएर आम्दानी बढाउँदै लैजाने र विकासे काम गर्न ठूला दातृ निकायहरू– विश्व बैंक, एडीबीसँग सहुलियत दरमा ऋण सहयोग लिनुको विकल्पै छैन ।
पछिल्लो समय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र ऋणको रेशियो बढेको देखिन्छ । दातृ निकायहरूले त नेपाललाई दिने अनुदानमा पनि कडाइ गर्न थालिसके । अब कसरी तालमेल मिलाउने ?
ऋणको रेशियो र जीडीपीबीचको दूरी तत्काल नियन्त्रणमा आउने देखिन्न । यसमा हामी सतर्क हुन जरुरी छ । तर आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । आगामी वर्षसम्म हामीले यसअघि ऋण लिएका कतिपय आयोजना पूरा गरिसकेका हुनेछौं । जस्तै– पुनर्निर्माण प्राधिकरण अन्तर्गतका आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । ऋण लिएर निर्माण भइरहेका गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोशी आयोजना पनि करीब सकिने अवस्थामा छन् । कतिपय चलिरहेका आयोजनामा अब हामीले ठूलो स्रोतको सुनिश्चितता दिनुपर्नेछ । जस्तै– काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)लाई आगामी वर्ष ठूलो रकम छुट्याउनुपर्नेछ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मोडालिटी तय हुनेबित्तिकै ठूलो स्रोतको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यस्तै पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग निर्माण एवं विस्तार गर्दा समेत ठूलो स्रोत चाहिनेछ भने पुष्पलाल, मध्यपहाडी लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग करिब सकिनै लागे पनि स्रोत अझै आवश्यक पर्ने देखिन्छ । रेल, सुरुङमार्ग, पानीजहाजसम्मका योजनालाई अबको दिनमा गति दिँदा आन्तरिक स्रोतले कुनै हालतमा भ्याउँदैन । त्यसका लागि दातृ निकायकै भर पर्नुपर्ने हुँदा अझै पनि जीडीपी र ऋणको रेशियो बढ्दै जानेछ । अनुदान लिन उनीहरूका शर्त नै धेरै हुने भएकाले हामीले खासै इच्छा पनि देखाउन छाडेका हौं । यसले केही फरक पर्दैन । खासगरी ‘गेमचेञ्जर’ आयोजनामा दातृ निकायबाट प्राप्त ऋण समयमै उपयोग गर्नेतर्फ सरकारी निकायले गम्भीतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ । यससँगै सरकारले आन्तरिक आम्दानी बलियो बनाउन समेत जोड दिनुपर्छ ।
पछिल्ला वर्षमा राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न नेतृत्वको दबाबमा वितरणमुखी कार्यक्रममा समेत दातृ निकायबाट ऋण लिएर राज्यलाई भार पार्ने प्रवृत्ति देखिएको छ नि ?
यो प्रवृत्ति विगतमा देखियो । सामान्यतया ऋण लिएर वितरणमुखी कार्यक्रम गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा म छु । तर समयको माग अनुसारका कतिपय कार्यक्रम ऋण लिएरै चलाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यस्ता कार्यक्रमलाई अब वितरणमुखी भन्दा पनि आर्थिक सबलीकरणका कार्यक्रमका रूपमा लिइनुपर्छ । ऋण लिएर चलाइएका वितरणमुखी जस्तै देखिने कतिपय कार्यक्रमको हामीले समीक्षा थालिसकेका छौं । जस्तै– प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । यो कार्यक्रम ऋण लिएर सञ्चालन गरिए पनि प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै आलोचना खेप्दै आउनु परेको छ । योजना आयोगले यो कार्यक्रमको आन्तरिक मूल्यांकन गर्न थालिसकेको छ । योजना आयोगका सदस्यको नेतृत्वमा फिल्डमै गएर कार्यक्रम कार्यान्वयनको स्थिति र प्रभावकारिताको बारेमा अध्ययन अघि बढाइएको हो । सातै प्रदेशमा गएर सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था हेरेर निष्कर्ष निकाल्दै छौं । यसका सुधार गर्नुपर्ने पक्ष विश्लेषण गरी यो कार्यक्रम नयाँ फ्रेमवर्कमा अघि बढ्न सक्ने सम्भावना छ । अब सञ्चालित यस्ता कार्यक्रम रोजगारीका साथै पूँजी निर्माणमा केन्द्रित गराउनुपर्छ । सडकदेखि भौतिक निर्माणसम्मको काममा बेरोजगारलाई लगानी गर्नेगरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर छ ।
संघीयता कार्यान्वयनदेखि ठूला पूर्वाधार निर्माणसम्ममा वैदेशिक सहायताको खाँचो देखिरहेको बेला स्तरोन्नतिस“गै सहायतामा पनि कमी आउने हो कि भन्ने चिन्ता गर्न थालिएको छ नि ?
स्तरोन्नति हुँदा कतै हामी अरूसँग प्रतिस्पर्धी बन्न सक्दैनौं कि भन्ने चिन्ता हो । तर वैदेशिक सहायता नै नआउने भन्ने हुँदैन । ठूला दातृ निकायहरू– एडीबी, विश्व बैंकलगायतको ऋण दिने आफ्नै ‘पोलिसी’ हुन्छ । हामीलाई उनीहरूले कुनै कमी हुन दिँदैनन् । बरु ऋण परिचालनमा गम्भीरताका साथ लागेर सञ्चालित आयोजना÷कार्यक्रम समयमै सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । ऋण लिएर समयमै काम पूरा ग¥यौं भने हाम्रो अर्थतन्त्र पनि बलियो हुँदै जानेछ ।
भर्खरै मात्र चालू वर्षको बजेटको ६ महीनाको समीक्षा पनि भयो । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो पाउनु भयो ?
चालू वर्षको ६ महीनाको बजेट समीक्षा हेर्दा धेरैजसो सूचकांकहरूले लक्ष्य भेट्न सकेका छैनन् । तर खर्चको पाटो हेर्दा गतवर्षको तुलनामा महामारीकै बीचमा भए पनि सुधार आएको देखिन्छ । यसैमा सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था भने छैन । हाम्रो खर्च प्रणाली अझै पनि कमजोर नै देखिएको छ । खर्च प्रणालीमा रहेका समस्या के के छन्, एकिन गरी समाधानको बाटोमा लाग्नैपर्छ । समग्रमा बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । खुला अर्थतन्त्रमा आधारित मुलुक भएकाले विश्व अर्थतन्त्र सुधार नभएसम्म कोरोनाले थलिएको हाम्रो अर्थतन्त्र पूर्णरूपमा सबल हुने अवस्था छैन । तर पनि लामो समयसम्म कोभिडलाई कारण देखाउँदै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कोमामा राखिरहनु हुँदैन । अब हाम्रो प्रणालीलाई चलायमान बनाई लक्ष्य भेट्नेगरी नै काम अघि बढाउनुपर्छ ।
बहुमत प्राप्त सरकार हुँदा पनि विकासको गति कमजोर देखियो । किन यस्तो भयो ?
खासगरी सरकारी खर्च पर्याप्त रूपमा नहुने समस्या नै विकासको बाधक रहेछ । खर्च बढाउन प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता देखिएको छ भने नेता, नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रबीच अझै पनि समन्वयको अभाव छ । विगतदेखि नै परियोजना पहिचान, छनोट, डिजाइनदेखि ठेक्का पट्टासम्ममा प्रणालीगत समस्या रहेको पाइन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले तीन तहका सरकारबीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । यस्तै प्राविधिकको अभाव, अनुगमन मूल्यांकनमा समेत कमी भएकाले विकासको गति कमजोर भएको हो ।
त्यसो त केही हिस्सा विकासले गति लिइरहे पनि हामीमा धेरै आकांक्षा हुँदा पनि समस्या भएको छ । जनताले धेरै आश गर्ने, तर कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुँदा विकासै भएको छैन कि जस्तो देखिएको छ ।
समग्रमा अब सरकार र निजीक्षेत्रको काम गर्ने क्षमता बढाउन जरुरी छ । काम गर्न प्रणालीगत रूपमा सुधार्नुपर्ने पक्षलाई छिटो सल्टाउन जरुरी छ । अब दण्ड÷पुरस्कारलाई आकर्षित गरेर भए पनि विकासलाई तीव्रता दिन लाग्नुपर्छ । विकासलाई तीव्रता दिने नै हो भने सिस्टममा ‘ब्रेक थ्रू’ गर्नैपर्छ । यसका लागि हामीले महत्त्वपूर्ण नीतिहरू पनि लिइसकेका छौं । कार्यान्वयनका लागि केही समय कोरोनाले असर ग¥यो । अहिले पुुनः राजनीतिक अस्थिरता बढेको छ । अब यही अवस्था रहिरहने हो भने हाम्रा नीतिहरू कार्यान्वयनमा समस्या हुनेछ र विकासको गति झन् कमजोर बन्न सक्ने खतरा छ ।
कोरोनाले समग्र अर्थतन्त्रमा असर गरिरहेको बेला अति कमबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ । अहिले नै यो जरुरी थियो ?
१३औं योजनापत्रबाटै हामीले स्तरोन्नतिको मुद्दा बोकेर हिँडेका रहेछौं । करीब ९ वर्षदेखि हामीले लिएर हिँडेको मुद्दा पूरा हुन लक्ष्य सूचकांकहरूले हामीलाई साथ दिएको अवस्था छ । २०१८, २०१९, २०२० मा संयुक्त राष्ट्र संघले दिएको तथ्यांक अनुसार त्यहाँको प्रगति हेर्दा हामी तीव्र गतिमा गएका रहेछौं । जस्तै– प्रतिव्यक्ति आय २०१८ मा अहिले हाम्रो १०२७ पुगिसक्यो । तीनओटामध्ये लगातार दुईपटक पास भए हुने भएकाले हामी तीन पटक पनि पास हुने स्थिति छ । त्यसो हुँदा हामी स्तरोन्नतिको प्रक्रियामा गएका हौं । पर्याप्त सुविधासहित ५ वर्षको ‘ग्रेस पिरियड’ राखेर स्तरोन्नति हुन खोजिएको हो । यसको तयारी पहिलेदेखि नै चलिरहेकाले कुनै हतार गरिएको छैन । स्तरोन्नति हुनेबित्तिकै मुलुकमा वैदेशिक लगानीका लागि आकर्षण तीव्ररूपमा बढ्नेछ, हाम्रो स्वाभिमान पनि उँचो हुनेछ । त्यस्तै, सधैंभर हाम्री परनिर्भर नै रहने नभई आत्मनिर्भर बन्न समेत सिक्नेछौं । स्तरोन्नति हुँदा सहुलियतपूर्ण ऋण नपाउने, भन्सारतर्फको सुविधा गुम्ने भन्ने छ । तर हामी हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।